भगवान शिवको बिषेश दिन सोमबार,भाकल/प्रतिज्ञा,उपवास वा व्रत बस्ने दिन – Khabar PatrikaNp
भगवान शिवको बिषेश दिन सोमबार,भाकल/प्रतिज्ञा,उपवास वा व्रत बस्ने दिन
August 24, 2020 39
काठमाडौ, उपवास वा व्रत, हिन्दुधर्मालम्वीहरुले आफ्नो भाकल/प्रतिज्ञा पुरा गर्न गर्ने गर्दछन्। व्रत केवल शारिरीक स्वास्थ्यको दृष्टीबाट मात्र महत्वपुर्ण छैन। हप्ताका प्रत्येक दिन एक वा धेरै देवी देवताको लागि व्रत बस्ने प्रथा चलिआएको छ हिन्दु धर्ममा। यस्तैमा सोमबार भने सामान्यतया शिवको लागि समर्पित छ। सोमबारको व्रत सूर्य उदयसंगै सुरु हुन्छ अनि सूर्य अस्ताए पछि सकिन्छ। खाना बेलुकाको आरती सकिएपछि खाइन्छ। दिनमा शिव र पार्वतीको पुजा तथा आराधना गरिन्छ।
सोमबार व्रत बस्ने चलन कसरी सुरु भयो? सोमबार शिवको व्रत बस्ने चलनको पछाडी धेरै कथाहरु चलिआएका छन। यी कथाहरु मध्ये तीन कथाहरु बढी चर्चित छन्। पहिलो कथा एक गरिब ब्राह्मणको बारेमा छ जसले शिवको व्रत पश्चात धन प्राप्त गरेको कथा छ। दोस्रो, एक धनी व्यापारीको छ। जसको छोरा थिएनन्। लामो प्रतिक्षा पछि छोरा जन्मिए तर छोटो समयमै मृत्यु हुन पुग्यो। कथा अनुसार शिव र पार्वतिको कृपाले छोराको पुर्नजन्म भएको थियो। तेस्रोः शिव र पार्वतीले खेलेको कौडा खेलको कथा छ।
Prevअमलाको जुसले निको पार्छ यी रोगहरु- जानकारी सहित (भिडियो हेर्नुहोस्)
Nextकाठमाडौंमा एकसहित ८ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु : मृतकको संख्या १५७ पुग्यो
एउटै कुकुरको मूल्य २२ करोड !
अहिले एउटा स्टाटसले सबैको मन रुवाएको छ। म अरबमा छु श्रीमती अस्पतालमा छटपटाई रहेकी छिन् धेरै ब्लड चाहिन्छ रे क्रिपया सहयोग गरिदिनुहोस्
धन कमाउने तान्त्रिक विधि
मुस्लिम अरबिक महिलालाई ग’र्लफ्रेन्ड बनाउदा काठमाण्डौमा महल बन्यो… (15307)